Web Security [Z.com SSL]
Microsoft Office နှင့် PDF စာရွက်စာတမ်းများတွင် လက်မှတ်ထည့်သွင်းပြုလုပ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ
Digital Signature ဆိုတာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Email Message, Software Or Digital Document (Microsoft Word, Excel, PowerPoint,PDF,etc.)တွေကို အမြင့်မားဆုံးသော လုံခြုံမှုနှင့်အတူ လက်ခံရရှိသူ၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိစေရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Authorized Certificate တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ Invoiceများ၊ Purchase Orderများ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ Clientအသစ်များနှင့် အရောင်းအဝယ်အသစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာရွက်စာတမ်းများကို Onlineမှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ရန် (သို့) ဖလှယ်ရန် လိုအပ်လာတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Digital Signature နှင့် Electronic Signatureသည် လုပ်ဆောင်ပုံခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုခြင်း မတူညီနိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် အောက်ပါအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး Digital Signature တွေနဲ့ Electronic Signature တွေရဲ့ ကွဲပြားမှုကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သည် ပြန်လည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်သည် ရေးထိုးပြီးသည်မှစ၍ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကို မပြုပြင်နိုင်ပါ ။
အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်များ အသုံးပြုရသည်မှာ ရိုးရှင်း လွယ်ကူပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များ အသုံးပြုရသည်မှာ လွယ်ကူပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ပို၍ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ်တွင် အီလက်ထရောနစ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသူနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ဖော်ပြလိုပါက ၎င်းကို သီးခြားစီထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များတွင် နာမည်၊ အီးမေးလ်၊ လိပ်စာနှင့် ကုမ္ပဏီအမည်စသည့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသူကို ကိုယ်စားပြုသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
စာရွက်စာတမ်းစစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းတွင်သာမက အီးမေးလ်တို့၏ လုံခြုံမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်များတွင် မှတ်တမ်းများကို အလွယ်တကူမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များတွင် မှတ်တမ်းတစ်ခုကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သူအသုံးပြုသည် စသည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။
၁။ Paper-based workflowတွေကို အချိန်ကုန်လူသက်သာစွာ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
၂။ Electronic document workflowတွေကို	လုံခြုံစေခြင်း။
၃။ စာရွက်စာတမ်းများ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို လုံခြုံစေခြင်း၊	ကာကွယ်ပေးခြင်း။
၄။ အချိန်နှင့်အမျှ အရေးတကြီးပို့ရန်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းများ၊ စာချုပ်များအတွက် အသက်သွေးကြောသဖွယ်ဖြစ်ခြင်း။
Prove your IDENTITY with your email
Phishing email ပေါင်းများစွာ ဟက်ကာတွေမှ နေ့စဉ်ပို့နေတယ်ဆိုတာ သင်သတိထားမိပါသလား? Phishing email များကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများစွာ	ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာရော သင်သတိထားမိပါသလား? ဟက်ကာတွေဟာအမြဲတစေ လူယုံအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သင့်ထံကို email ပို့ဆောင်နေတက်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Digital Signature သည်သင်၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Digital Signature Certificate (Personal Sign) သည် Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူသည် ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အီး‌မေးလ်များ encrypt ပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် encrypt အီး‌မေးလ်များကို လက်ခံသူသည် ပေးပို့သူကဲ့သို့ Personal Sign Certificate or တစ်ခြား S/MIME service ကို အသုံးပြုမှသာ dataကို decrypt လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် မိမိပေးပို့လိုက်သော အီး‌မေးလ်တွင် မိမိ၏ နာမည်၊ အီး‌မေးလ်၊ လိပ်စာနှင့် ကုမ္ပဏီအမည်စသည့် အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့် customerများ၏ ယုံကြည်မှုကိုလဲ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်များကြောင့် Digital Signatureသည် သင်၏လုပ်ငန်း Emailတွင် အရေးပါမည့် security service အဖြစ်ထည့်သွင်း အသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
လူတိုင်း လုပ်ငန်းတိုင်း paper-based workflow တွေအစား Digital Signature ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီး အကျိုးကျေးဇူးများ ရယူနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့ Industry တွေထဲကအချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။